10acre Fall Escape+HOT TUB+Umdlalo RM+Fayibha Internet
Ilizwe elizimeleyo nelivulekileyo elihlala kunye nePILI LABUCALA KUNYE NE-IDOOR SPA/HOTTUB kwiihektare ezili-10-imihlaba ehonjiswe kakuhle ejikelezwe yi-acreage eyenziwe ngamaplanga. Abantwana kunye neentsapho zamkelekile! Sine-pack n play kunye nesitulo esiphezulu esifumanekayo xa siceliwe. Eli likhaya lethu leholide esilithanda kakhulu, kwaye siyathemba ukuba uyakulonwabela njengokuba sisenza. Sikwiikhilomitha ezili-15 ukusuka eNotre Dame!
*Amagumbi okulala ama-3, igumbi lokuhlambela eliyi-3.5, kunye negumbi eliphezulu elivulekileyo elinomgangatho ophakamileyo we-queen wokutsala, 3500 Sq Ft, Sleeps 8
* Iihektare ezili-10 zokuphononongwa- iitoni zamaqunube amnyama, amaqunube kunye neemorels kwipropati ukonwabela ehlotyeni.
*Ispa sangaphakathi/Itubhu eshushu
* Ichibi labucala / elingasese (elivulwa ukusuka nge-1 kaJuni ukuya ekupheleni kukaSeptemba)
* Indawo yomlilo yangaphandle kunye nezihlalo
*Igumbi elihle le-3 lexesha lokunandipha.
*Indawo yokutyela yangaphakathi ye8.
* Itafile yepool, itafile yefoosball, itafile yeping pong kwigumbi elingaphantsi
* Ibha yeRetro kwigumbi elingaphantsi
* Isantya esiphezulu seFayibha ye-Intanethi ukwenza ukusebenza ekhaya kube yimpepho!
*yabucala, iofisi ezolileyo enedesika, imonitha yedesktop kunye nesitulo seofisi
* I-driveway yabucala enendawo yokupaka eninzi
Amachibi amnandi! Ukuqhuba ngokukhawuleza ukuya kwi-Eagle Lake, i-Pleasant lake, i-Diamond Lake, kunye ne-Stone Lake (i-10-15mins). Imizuzu engama-30 ukuqhuba ukuya eMzantsi Bend/Notre Dame. Ngaphantsi kwemizuzu engama-30 ukuya kuMzantsi-ntshona weMichigan kwiindlela zeWayini. Eminye imisebenzi kule ndawo ibandakanya iziqhamo ezintle zokuvunwa, ukukhwela ihashe, kunye ne-kayak / irenti yezikhephe kumachibi asekhaya kunye nemilambo. Ngaphantsi kweyure ezi-2 ukusuka eChicago. Zonwabele izilwanyana zethu zasendle—amaxhama, iturkey kunye nezinye izilwanyana ziyakhula ngokomlinganiselo othile.
Indlela ye-Indigan yindlela ezolileyo, yokuhlala enezindlu ezimbalwa kuphela. Sicela zonke iindwendwe ukuba zihlale kwi-10 yeehektare zepropathi yethu, kwaye sihlale iiyure ezithe cwaka ukusuka ngo-10 ukuya ku-9a ngenxa yentlonipho yabamelwane bethu abamangalisayo.